Wararkii u dambeeyey ee Wadahadalladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Daalibaan – AwKutub News
Wararkii u dambeeyey ee Wadahadalladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Daalibaan
By awkutubnews January 25, 2019
Leave a Comment on Wararkii u dambeeyey ee Wadahadalladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Daalibaan
Waxaa soo baxaya ifafaalo ah in horumar laga sameeyey wadaahadalladii Maraykanka iyo Daalibana ku dhexmarayey waddanka Qadar, taasoo keentay in dadka qaar ay u arkaan in degaanansho siyaasadeed laga gaadhi karo colaadda 17-ka sano socota ee Afghanistan.
Wadahadallada ayaa furmay Isniintii, waxayna dhexmarayeen koox uu hoggaamiyo ergayga Maraykanka Zalmay Khalilzad iyo Daalibaanka, waxaa kaloo joogay wakiillada Qadar iyo Pakistaan.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in labada dhinac ay ka wadahadleen arrimo kala duwna oo ku saabsan xasilinta waddankaasi.
Daalibaan ayaa ku dhowaaqay inay doonayaan in waqti loo qabto xilliga ay Maraykanku ka baxayaan dalkaasi, taasi beddelkeedana waxay bixinayaan dammaanqad inaan waddankaasi loo adeegsan meel laga weeraro Marayanka.
Wararka ayaa sheegaya in Daalibaanku ay ku dhowaaqi karaan xabad-joojin haddii horumar laga sameeyo qodobka u weyn ee dalabkooda oo ah inay Maraykanku ka baxaan Afghanistan.
Dhinaca kalena Daalibaanka ayaa magacaabay wakiil u joogi doona xafiiskooda Qadar oo lagu magacaabo Mullah Cabdul Ghani Baradar, ninkaasi oo ka mid ah taliyayaasha milatariga Daalibaan isla markaana hoggaaminaya wadahadallada ka socda Qadar.
Tags: baakistaan Caalamka Daalibaan Maraykanka Qatar Wadahadal Wararka
Previous Entry Sacuudiga ma ka fileysay tartanka heesaha iyo qoob ka cayaarka?
Next Entry Shirka suuqgeynta shidaalka Soomaaliya oo maanta London ka furmaya